बिटु केसी बराल , (ह्युस्टन , टेक्सास )
अनायासै तिम्रो त्यो हेराइको अन्दाजले
गहकिलो अबोध चन्चलपनले
मुग्ध पार्ने , सरल त्यो सटिक मुस्कानले<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
यो मुटु स्तब्ध छ ।।
मेरो मानसपटलमा सधैं
प्रस्फुटित हुन खोज्ने
तिनै स्वर शब्द नै हुन् ।।
के थाहा मलाई ?
बन्द परेलीमा आइरहने
जतासुकै मलाई पछ्याइरहने
ती तिम्रा छाया नै हुन् ।।
आश्चर्य लाग्छ मलाई
युगौदेखि मेरो आभाषमा आउने
त्यही पनहरू नै थियो
बषौदेखिको मेरो तिर्खा
त्यही नयनको हेराइ थियो ।।
भर्खरैको चिनजानी म कसरी भनु ?
दुइचार दिनको बोलिचाली हो , म कसरी मानु ?
मैले थाहै नपाई
त्यो स्वरुप त
मेरो मन मष्तिस्कमा
सदियौदेखि अमिट छाप भएर
छाप्पिई सकेको रहेछ !!